October 27, 2019 phyo Articles 0
TANAWAN, PHILIPPINES, FEBRUARY 14 2014: - UNICEF Goodwill Ambassador David Beckham plays with children affected by Typhoon Haiyan ataUNICEF-supported tented school. Photo by: Per-Anders Pettersson for UNICEF.
ဘောလုံးအားကစားနညျးဆိုတာ ကမ်ဘာပျေါမှာ ပရိသတျစိတျဝငျစားမှုအမြားဆုံးအားကစားနညျးဖွဈပွီး ဥရောပထိပျတနျးလိဂျတှမှော ကစားသမားတှရေဲ့ဝငျငှကေ အားကခြငျြစရာကောငျးလောကျအောငျ မြားပွားပါတယျ။ ကစားသမားအမြားစုက ဝငျငှမွေငျ့မားတာနဲ့အတူ တနျဖိုးကွီးစံအိမျတှေ ဝယျယူလရှေိ့သလို တခွားစီးပှားရေးလုပျငနျးတှမှောလညျး ရငျးနှီးမွှုပျနှံလရှေိ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဘောလုံးသမားတှဟော အလှူအတနျးရကျရောမှုမှာလညျး ရှကေ့နေ ဦးဆောငျလမျးပွနသေူတှဖွေဈပွီး သူတို့ရဲ့နာမညျကြျောကွားမှုနဲ့အတူ တခွားလူတှပေါ လိုကျလုပျခငျြလာအောငျရော၊ သူတို့ရဲ့အတှငျးခံစိတျအရပါ အမြားစုမှာ လှူဒါနျးလရှေိ့ပါတယျ။
ဘကျခမျးဆိုတာ ဖကျရှငျအိုငျကှနျတဈဦးဆိုတာထကျ ပိုပါတယျ
အင်ျဂလိပျဘောလုံးသမိုငျးတဈလြှောကျ အကွီးကယျြဆုံးကစားသမားတဈဦးဖွဈသလို အလှူအတနျးအရကျရောဆုံးကစားသမားတဈဦးအဖွဈလညျး ထငျရှားကြျောကွားပါတယျ။ သူဟာ UNICEF နဲ့ Help For Heroes တို့အတှကျ သံတမနျတဈဦးအဖွဈ ဆောငျရှကျနသေလို Malaria No More နဲ့ Victoria and David Beckham Charitable Trust အဖှဲ့အစညျးတှအေတှကျလညျး ကိုယျစားပွုဆောငျရှကျနပေါတယျ။ Victoria and David Beckham Charitable Trust က ကလေးတှအေတှကျ လိုအပျတာတှေ ထောကျပံ့ပေးနိုငျဖို့အတှကျ ရနျပုံငှအေဓိကရှာဖှတေဲ့အဖှဲ့ဖွဈသလို တခွားလူမှုအဖှဲ့အစညျးတှေ၊ မသနျစှမျးတှအေတှကျလညျး ထောကျပံ့ပေးနတေဲ့အဖှဲ့အစညျးဖွဈပါတယျ။ ဘကျခမျးဟာ အခုခြိနျအထိလညျး ကမ်ဘာလောကကွီး ဒီထကျပိုမိုကောငျးမှနျလာစရေေးအတှကျ သူတတျနိုငျတဲ့ဘကျကနေ တတျနိုငျသမြှ ငှအေား၊ လူအားပါဝငျကူညီပေးလရှေိ့ပါတယျ။
လကျရှိရိနျးဂြားဈအသငျးတိုကျစဈမှူး ဂြာမိနျးဒီဖိုး ဘယျလောကျလှူတယျ၊ ဘယျနရောကိုလှူတယျ စသဖွငျ့ အဲဒီအခကျြအလကျတှကေို သိပျမသိကွပမေယျ့ ပရိသတျတှကေတော့ နူးညံ့တဲ့နှလုံးသားပိုငျရှငျအဖွဈ သူ့ကို သတျမှတျထားပါတယျ။ သူဟာ ဆနျးဒါးလနျးအသငျးမှာ ကစားနတေုနျးက ဆနျးဒါးလနျးကလေးပရိသတျတဈဦး ကငျဆာရောဂါခံစားနတေယျလို့ သိသှားခဲ့ပွီး ဘရကျဒလလေျောရေးလို့ အမညျရတဲ့အဲဒီကလေးလေးကို သှားတှကေ့ာ အသငျးရဲ့လာကျကောငျရုပျလေးအဖွဈ ကှငျးထဲအထိ ချေါဆောငျလာခဲ့ပါတယျ။ လျောရေးတဈယောကျ ကငျဆာရောဂါကို အရှုံးပေးသှားခဲ့ရပွီးနောကျ ဒီဖိုးလညျး ညာဘကျလကျမောငျးမှာ အဲဒီကလေးလေးရဲ့နာမညျကို တကျတူးရေးထိုးကာ ဂုဏျပွုခဲ့ပါတယျ။
ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးကစားသမားတဈဦးအဖွဈ သတျမှတျခံထားရတဲ့ဘာစီလိုနာတိုကျစဈမှူး မကျဆီဟာ UNICEF ရဲ့တဈကမ်ဘာလုံးဆိုငျရာသံတမနျတဈဦးအဖွဈ ဆောငျရှကျနပေါတယျ။ သူဟာ အဲဒီအဖှဲ့နဲ့အတူ လကျတှဲဆောာငျရှကျရငျး အငျဒိုနီးရှား၊ နီပေါနဲ့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံတှမှော ပညာရေးစနဈပိုမိုတိုးတကျကောငျးမှနျလာစဖေို့ ကူညီနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဒီလို UNICEF နဲ့ လကျတှဲလုပျဆောငျနတေဲ့အပွငျ သူ့မှေးရပျမွအောဂငျြတီးနားနိုငျငံမှာလညျး လူမှုအကြိုးပွုလုပျငနျးတှေ လုပျဆောငျနပေါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အမြားပွညျသူနဲ့သကျဆိုငျတဲ့ပရောဂကျြလုပျငနျးတှမှော အမြားအပွားလှူဒါနျးလရှေိ့သလို အာဂငျြတီးနားနိုငျငံမှာ လိုအပျခကျြမြားနတေဲ့ ဆေးရုံပါ ဆောကျလုပျလှူဒါနျးခဲ့ပါတယျ။
အာဆငျနယျနဲ့ ပို့ဈမောကျအသငျးတိုကျစဈမှူးဟောငျး ကနူးဟာ မှေးရပျမွေ နိုငျဂြီးရီးယားနိုငျငံမှာ ကလေးတှနေဲ့ပတျသကျလို့ ဖောငျဒေးရှငျးတဈခုတညျထောငျထားပါတယျ။ အဲဒီဖောငျဒေးရှငျးက နှလုံးရောဂါခံစားနရေတဲ့ ကလေးတှကေို အခမဲ့ကုသပေးနတောဖွဈပွီး ၂၀၀၀ ပွညျ့နှဈမှာ အဲဒီဖောငျဒေးရှငျးစတငျတညျထောငျခဲ့ပွီးနောကျ ကလေးငယျပေါငျး ၅၀၀ ကြျောကို နှလုံးရောဂါခှဲစိတျကုသမှုတှေ ပွုလုပျပေးနိုငျခဲ့ပွီး ဘဝရှငျသနျခှငျ့ရရှိအောငျ ကူညီပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
အာဆငျနယျအသငျးကှငျးလယျလူ အိုဇေးလျဟာ ၂၀၁၄ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ ဂြာမနီအသငျး ဗိုလျစှဲနိုငျခဲ့ပွီးနောကျ ဘယျသူမှမထငျမှတျထားတာ လုပျဆောငျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒါကတော့ ပွိုငျပှဲတဈခုလုံးမှာ ရရှိခဲ့တဲ့ဆုကွေးအားလုံး (ပေါငျ ၂၃၇၀၀၀)ကို ကမ်ဘာ့ဖလားအိမျရှငျ ဘရာဇီးနိုငျငံရှိ လူမှုအဖှဲ့အစညျးတှဆေီ လှူဒါနျးခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီအဖှဲ့အစညျးတှကေလညျး ကလေးငယျတှအေတှကျ လိုအပျနတေဲ့ဆေးဝါးတှေ ဝယျယူရာမှာ အကြိုးရှိရှိ အသုံးခခြဲ့ပါတယျ။ ၂၀၁၇ ခုနှဈမှာလညျး အိုဇေးလျဟာ My Shining Star လူမှုအဖှဲ့အစညျးနဲ့အတူ လကျတှဲလုပျဆောငျပွီး ကငျဆာရောဂါခံစားနရေတဲ့ကလေးငယျတှေ သူတို့ရဲ့အိပျမကျတှေ ဆကျလကျအကောငျအထညျဖျောနိုငျစဖေို့ အကူအညီပေးခဲ့ပါတယျ။ ကငျဆာရောဂါသညျကလေးလေးတဈယောကျကိုတောငျ ဆနျးဒါးလနျးနဲ့ပှဲမှာ အထူးဧညျ့သညျတျောအဖွဈ ဖိတျချေါခဲ့ပါသေးတယျ။
လူမှုအကြိုးပွုလုပျငနျးတှမှော ရျောနယျဒိုလောကျ လှူဒါနျးသူ ကစားသမားအနညျးငယျလောကျပဲရှိမှာပါ။ သူဟာ ဒျေါလာ ၁၀၈ သနျးလောကျတနျကွေးရှိပမေယျ့ သူ့နှလုံးသားက အဲဒီပမာဏထကျ အမြားကွီးပိုတနျဖိုးရှိပါတယျ။ သူဟာ ၂၀၁၂ ခုနှဈမှာ သူရရှိခဲ့တဲ့ ဥရောပရှဖေိနပျဆုကို လလေံတငျခဲ့ပွီး ရရှိလာတဲ့ ယူရို ၁.၅သနျးကို စဈဘေးဒဏျသငျ့ ဂါဇာဒသေမှာ ကြောငျးဆောကျလှူဒါနျးခဲ့ပါတယျ။ ရျောနယျဒိုဟာ Save the Children လို အဖှဲ့အစညျးမှာလညျး သံတမနျအဖွဈ ဆောငျရှကျနပွေီး အဲဒီအဖှဲ့ကနတေဈဆငျ့ ၂၀၁၅ ခုနှဈမှာဖွဈပှားခဲ့တဲ့ နီပေါငလငျြဒဏျအတှကျ ငှကွေေးအမြားအပွား လှူဒါနျးခဲ့ပါတယျ။
ဂါနာအတှကျ လှူဒါနျးနတေဲ့ အကျဆီယနျ
ကှငျးလယျမှာ မမောမပနျးကစားနိုငျခဲ့သူအဖွဈ ထငျရှားကြျောကွားခဲ့တဲ့ ကှငျးလယျလူဟောငျး မိုကျကယျအကျဆီယနျကလညျး ခြဲလျဆီးအသငျးနဲ့အတူ သူ့ရဲ့နာမညျကို အကောငျးဆုံးတညျဆောကျနိုငျခဲ့သူပါ။ ကှငျးပွငျပမှာတော့ သူက နှလုံးသားလှသူဖွဈပွီး မှေးရပျမွဂေါနာနိုငျငံမှာ အလှူအတနျးတှေ ပုံမှနျလုပျလရှေိ့ပါတယျ။ သူဟာ မိုကျကယျအကျဆီယနျဖောငျဒေးရှငျးတညျထောငျပွီး ဂါနာနိုငျငံမှာ ပညာရေးတိုးတကျစရေေးအတှကျ စာကွညျ့တိုကျတှအေမြားအပွားတညျထောငျခဲ့ပွီး အမြားပွညျသူနဲ့သကျဆိုငျတဲ့ ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှုစငျတာတှကေိုလညျး တဈပိုငျတဈနိုငျကူညီခဲ့ပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အကျဆီယနျဟာ ဂါနာမှာ သနျ့ရှငျးတဲ့သောကျရရေရှိရေးအတှကျ ဦးစားပေးလှူဒါနျးနပေါတယျ။
ပွညျတှငျးစဈကို ရပျတနျ့စနေိုငျခဲ့သူက ဒရော့ဘာ
ဒရော့ဘာဟာ အိုငျဗရီကို့ဈပွညျတှငျးမှာ ကာလရှညျဖွဈပှားနတေဲ့စဈပှဲ ရပျတနျ့အောငျ ဦးဆောငျစညျးရုံးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ သူဟာ ၂၀၀၆ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲကာလအတှငျး လကျရှေးစငျအသငျးကို အပွညျ့အဝအားပေးဖို့အတှကျ လကျနကျတှဘေေးခပြွီး စညျးလုံးညီညှတျစှာအားပေးဖို့ စဈဖွဈနသေူတှကေို တောငျးဆိုခဲ့ပါတယျ။ အစိုးရနဲ့ တျောလှနျရေးသမားတှလေညျး ဒရော့ဘာရဲ့တိုကျတှနျးမှုကို လကျသငျ့ခံကာ စဈပှဲကို ရပျတနျ့ခဲ့ပါတယျ။ သူဟာ ၂၀၀၇ ခုနှဈကလညျး ဒရော့ဘာဖောငျဒေးရှငျးတညျထောငျခဲ့ပွီး အာဖရိကတိုကျမှာ အဓိကဒုက်ခပေးနတေဲ့ ကနျြးမာရေးနဲ့ ပညာရေးကဏ်ဍတှမှော ကူညီနိုငျခဲ့ပါတယျ။
သနျ့ရှငျးတဲ့သောကျရရေဖို့ လှူဒါနျးခဲ့သူ နမော
နမောဟာ ကမ်ဘာ့ဘောလုံးလောကမှာ တတိယမွောကျဝငျငှအေမြားဆုံးကစားသမားဖွဈပွီး တခွားကစားသမားအမြားစုလိုပဲ သူလညျး အလှူဒါနလကျမနှေးသူဖွဈပါတယျ။ သူဟာ တခွားအဖှဲ့အစညျးတှကေို တတျနိုငျသလောကျငှကွေေးလှူဒါနျးလရှေိ့သလို Waves for Water အဖှဲ့အစညျးကိုလညျး ကိုယျတိုငျတညျထောငျထားပါတယျ။ အဲဒီအဖှဲ့အစညျးက ဘရာဇီးနိုငျငံတဈဝှမျး သနျ့ရှငျးတဲ့သောကျရရေရှိရေးအတှကျ အဓိကထားဆောငျရှကျနပွေီး ရနျပုံငှပေိုမိုရရှိအောငျ ဘောလုံးပှဲတှေ ကငျြးပလရှေိ့ပါတယျ။
ဘောလုံးအားကစားနည်းဆိုတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးအားကစားနည်းဖြစ်ပြီး ဥရောပထိပ်တန်းလိဂ်တွေမှာ ကစားသမားတွေရဲ့ဝင်ငွေက အားကျချင်စရာကောင်းလောက်အောင် များပြားပါတယ်။ ကစားသမားအများစုက ၀င်ငွေမြင့်မားတာနဲ့အတူ တန်ဖိုးကြီးစံအိမ်တွေ ၀ယ်ယူလေ့ရှိသလို တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘောလုံးသမားတွေဟာ အလှူအတန်းရက်ရောမှုမှာလည်း ရှေ့ကနေ ဦးဆောင်လမ်းပြနေသူတွေဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့နာမည်ကျော်ကြားမှုနဲ့အတူ တခြားလူတွေပါ လိုက်လုပ်ချင်လာအောင်ရော၊ သူတို့ရဲ့အတွင်းခံစိတ်အရပါ အများစုမှာ လှူဒါန်းလေ့ရှိပါတယ်။
ဘက်ခမ်းဆိုတာ ဖက်ရှင်အိုင်ကွန်တစ်ဦးဆိုတာထက် ပိုပါတယ်
အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက် အကြီးကျယ်ဆုံးကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်သလို အလှူအတန်းအရက်ရောဆုံးကစားသမားတစ်ဦးအဖြစ်လည်း ထင်ရှားကျော်ကြားပါတယ်။ သူဟာ UNICEF နဲ့ Help For Heroes တို့အတွက် သံတမန်တစ်ဦးအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသလို Malaria No More နဲ့ Victoria and David Beckham Charitable Trust အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်လည်း ကိုယ်စားပြုဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ Victoria and David Beckham Charitable Trust က ကလေးတွေအတွက် လိုအပ်တာတွေ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့အတွက် ရန်ပုံငွေအဓိကရှာဖွေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်သလို တခြားလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ မသန်စွမ်းတွေအတွက်လည်း ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်ခမ်းဟာ အခုချိန်အထိလည်း ကမ္ဘာလောကကြီး ဒီထက်ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရေးအတွက် သူတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ တတ်နိုင်သမျှ ငွေအား၊ လူအားပါဝင်ကူညီပေးလေ့ရှိပါတယ်။
လက်ရှိရိန်းဂျားစ်အသင်းတိုက်စစ်မှူး ဂျာမိန်းဒီဖိုး ဘယ်လောက်လှူတယ်၊ ဘယ်နေရာကိုလှူတယ် စသဖြင့် အဲဒီအချက်အလက်တွေကို သိပ်မသိကြပေမယ့် ပရိသတ်တွေကတော့ နူးညံ့တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်အဖြစ် သူ့ကို သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ သူဟာ ဆန်းဒါးလန်းအသင်းမှာ ကစားနေတုန်းက ဆန်းဒါးလန်းကလေးပရိသတ်တစ်ဦး ကင်ဆာရောဂါခံစားနေတယ်လို့ သိသွားခဲ့ပြီး ဘရက်ဒလေလော်ရေးလို့ အမည်ရတဲ့အဲဒီကလေးလေးကို သွားတွေ့ကာ အသင်းရဲ့လာက်ကောင်ရုပ်လေးအဖြစ် ကွင်းထဲအထိ ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ လော်ရေးတစ်ယောက် ကင်ဆာရောဂါကို အရှုံးပေးသွားခဲ့ရပြီးနောက် ဒီဖိုးလည်း ညာဘက်လက်မောင်းမှာ အဲဒီကလေးလေးရဲ့နာမည်ကို တက်တူးရေးထိုးကာ ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကစားသမားတစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှူး မက်ဆီဟာ UNICEF ရဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသံတမန်တစ်ဦးအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ သူဟာ အဲဒီအဖွဲ့နဲ့အတူ လက်တွဲဆောာင်ရွက်ရင်း အင်ဒိုနီးရှား၊ နီပေါနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတွေမှာ ပညာရေးစနစ်ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေဖို့ ကူညီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို UNICEF နဲ့ လက်တွဲလုပ်ဆောင်နေတဲ့အပြင် သူ့မွေးရပ်မြေအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှာလည်း လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပရောဂျက်လုပ်ငန်းတွေမှာ အများအပြားလှူဒါန်းလေ့ရှိသလို အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှာ လိုအပ်ချက်များနေတဲ့ ဆေးရုံပါ ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။
အာဆင်နယ်နဲ့ ပို့စ်မောက်အသင်းတိုက်စစ်မှူးဟောင်း ကနူးဟာ မွေးရပ်မြေ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာ ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုတည်ထောင်ထားပါတယ်။ အဲဒီဖောင်ဒေးရှင်းက နှလုံးရောဂါခံစားနေရတဲ့ ကလေးတွေကို အခမဲ့ကုသပေးနေတာဖြစ်ပြီး ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှာ အဲဒီဖောင်ဒေးရှင်းစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနောက် ကလေးငယ်ပေါင်း ၅၀၀ ကျော်ကို နှလုံးရောဂါခွဲစိတ်ကုသမှုတွေ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ဘ၀ရှင်သန်ခွင့်ရရှိအောင် ကူညီပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အာဆင်နယ်အသင်းကွင်းလယ်လူ အိုဇေးလ်ဟာ ၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ဂျာမနီအသင်း ဗိုလ်စွဲနိုင်ခဲ့ပြီးနောက် ဘယ်သူမှမထင်မှတ်ထားတာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုံးမှာ ရရှိခဲ့တဲ့ဆုကြေးအားလုံး (ပေါင် ၂၃၇၀၀၀)ကို ကမ္ဘာ့ဖလားအိမ်ရှင် ဘရာဇီးနိုင်ငံရှိ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဆီ လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း ကလေးငယ်တွေအတွက် လိုအပ်နေတဲ့ဆေးဝါးတွေ ၀ယ်ယူရာမှာ အကျိုးရှိရှိ အသုံးချခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာလည်း အိုဇေးလ်ဟာ My Shining Star လူမှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့အတူ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ပြီး ကင်ဆာရောဂါခံစားနေရတဲ့ကလေးငယ်တွေ သူတို့ရဲ့အိပ်မက်တွေ ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်စေဖို့ အကူအညီပေးခဲ့ပါတယ်။ ကင်ဆာရောဂါသည်ကလေးလေးတစ်ယောက်ကိုတောင် ဆန်းဒါးလန်းနဲ့ပွဲမှာ အထူးဧည့်သည်တော်အဖြစ် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေမှာ ရော်နယ်ဒိုလောက် လှူဒါန်းသူ ကစားသမားအနည်းငယ်လောက်ပဲရှိမှာပါ။ သူဟာ ဒေါ်လာ ၁၀၈ သန်းလောက်တန်ကြေးရှိပေမယ့် သူ့နှလုံးသားက အဲဒီပမာဏထက် အများကြီးပိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ သူဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ သူရရှိခဲ့တဲ့ ဥရောပရွှေဖိနပ်ဆုကို လေလံတင်ခဲ့ပြီး ရရှိလာတဲ့ ယူရို ၁.၅သန်းကို စစ်ဘေးဒဏ်သင့် ဂါဇာဒေသမှာ ကျောင်းဆောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ ရော်နယ်ဒိုဟာ Save the Children လို အဖွဲ့အစည်းမှာလည်း သံတမန်အဖြစ် ဆောင်ရွက်နေပြီး အဲဒီအဖွဲ့ကနေတစ်ဆင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ နီပေါငလျင်ဒဏ်အတွက် ငွေကြေးအများအပြား လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။
ဂါနာအတွက် လှူဒါန်းနေတဲ့ အက်ဆီယန်
ကွင်းလယ်မှာ မမောမပန်းကစားနိုင်ခဲ့သူအဖြစ် ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ကွင်းလယ်လူဟောင်း မိုက်ကယ်အက်ဆီယန်ကလည်း ချဲလ်ဆီးအသင်းနဲ့အတူ သူ့ရဲ့နာမည်ကို အကောင်းဆုံးတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သူပါ။ ကွင်းပြင်ပမှာတော့ သူက နှလုံးသားလှသူဖြစ်ပြီး မွေးရပ်မြေဂါနာနိုင်ငံမှာ အလှူအတန်းတွေ ပုံမှန်လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ သူဟာ မိုက်ကယ်အက်ဆီယန်ဖောင်ဒေးရှင်းတည်ထောင်ပြီး ဂါနာနိုင်ငံမှာ ပညာရေးတိုးတက်စေရေးအတွက် စာကြည့်တိုက်တွေအများအပြားတည်ထောင်ခဲ့ပြီး အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစင်တာတွေကိုလည်း တစ်ပိုင်တစ်နိုင်ကူညီခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အက်ဆီယန်ဟာ ဂါနာမှာ သန့်ရှင်းတဲ့သောက်ရေရရှိရေးအတွက် ဦးစားပေးလှူဒါန်းနေပါတယ်။
ပြည်တွင်းစစ်ကို ရပ်တန့်စေနိုင်ခဲ့သူက ဒရော့ဘာ
ဒရော့ဘာဟာ အိုင်ဗရီကို့စ်ပြည်တွင်းမှာ ကာလရှည်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲ ရပ်တန့်အောင် ဦးဆောင်စည်းရုံးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ၂၀၀၆ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကာလအတွင်း လက်ရွေးစင်အသင်းကို အပြည့်အ၀အားပေးဖို့အတွက် လက်နက်တွေဘေးချပြီး စည်းလုံးညီညွတ်စွာအားပေးဖို့ စစ်ဖြစ်နေသူတွေကို တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရနဲ့ တော်လှန်ရေးသမားတွေလည်း ဒရော့ဘာရဲ့တိုက်တွန်းမှုကို လက်သင့်ခံကာ စစ်ပွဲကို ရပ်တန့်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကလည်း ဒရော့ဘာဖောင်ဒေးရှင်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီး အာဖရိကတိုက်မှာ အဓိကဒုက္ခပေးနေတဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပညာရေးကဏ္ဍတွေမှာ ကူညီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သန့်ရှင်းတဲ့သောက်ရေရဖို့ လှူဒါန်းခဲ့သူ နေမာ
နေမာဟာ ကမ္ဘာ့ဘောလုံးလောကမှာ တတိယမြောက်ဝင်ငွေအများဆုံးကစားသမားဖြစ်ပြီး တခြားကစားသမားအများစုလိုပဲ သူလည်း အလှူဒါနလက်မနှေးသူဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကို တတ်နိုင်သလောက်ငွေကြေးလှူဒါန်းလေ့ရှိသလို Waves for Water အဖွဲ့အစည်းကိုလည်း ကိုယ်တိုင်တည်ထောင်ထားပါတယ်။ အဲဒီအဖွဲ့အစည်းက ဘရာဇီးနိုင်ငံတစ်ဝှမ်း သန့်ရှင်းတဲ့သောက်ရေရရှိရေးအတွက် အဓိကထားဆောင်ရွက်နေပြီး ရန်ပုံငွေပိုမိုရရှိအောင် ဘောလုံးပွဲတွေ ကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။